Ambanja : mangina tanteraka ny tampontanana
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Ambanja : mangina tanteraka ny tampontanana
Rechercher Valider	Ambanja : mangina tanteraka ny tampontanana	Imprimer	Mangina tanteraka ny tampontanana ao Ambanja ary maro ny sekoly nampiato fianarana amin'izao fotoana izao noho ilay savorivory nikasàna hanaovan'ny mponina fitsaram-bahoaka ilay lehilahy voarohirohy namono nahafaty tovolahy iray mpivarotra Katy. Raha ny vaovao marimpototra dia 4 no naratra voatifitra bala tena izy ary iray amin'ireo no tena naratra mafy voatifitry teo amin'ny kibony ary tsy maintsy nodidiana mihitsy ny tsinay. Ankoatran'izay dia olona naratra tamin'ny fitsoahana.Tsy misy ny maty hatreto. Raha tsiahivina dia efa misy volana iray lasa teo ho eo dia nisy lehilahy iray mpivarotra Katy nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana. Nisy olona voasambotra voarohirohy tamin'io vono olona io ka rehefa henon'ny vahoaka izany dia nitaky ny hanaovana fitsaram-bahoaka ilay voarohirohy efa nitanana ampoja ireo mponina. Raikitra ny fifanoherana teo amin'ny mpitandro filaminana sy mponina ka nisy ny voatifitra ary naratra. Nisy miaramila nalefa nanatevin-daharana ao ambanja mandra-pilamin'ny tanàna. Nandrianina